Genesis 29 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yakob ne Rahel hyiae (1-14)
Ná Yakob pɛ Rahel (15-20)
Yakob waree Lea ne Rahel (21-29)
Mma baanan a Yakob ne Lea woe ni: Ruben, Simeon, Lewi, ne Yuda (30-35)
29 Afei Yakob toaa n’akwantu no so kɔɔ nnipa a wɔte Apuei fam no asaase so. 2 Na ohui sɛ abura bi wɔ asaase no so a nguankuw abiɛsa butubutuw ho, efisɛ saa abura no mu nsu na na wɔsaw ma mmoa no nom. Ná ɔbo kɛse bi kata abura no ano. 3 Sɛ wɔboaboa nguan no nyinaa ano wɔ hɔ a, woyi ɔbo no fi abura no ano, na wɔama nguan no nsu anom; wowie a, na wɔasan de ɔbo no ato abura no ano. 4 Yakob bisaa wɔn sɛ: “Me nuanom, ɛhe na mufi?” na wobuae sɛ: “Yefi Haran.”+ 5 Obisaa wɔn sɛ: “Munim Nahor+ banana Laban?”+ Ɛnna wɔkae sɛ: “Yenim no.” 6 Ɛnna obisaa wɔn sɛ: “Ne ho ye anaa?” Wobuae sɛ: “Ne ho ye. Na ne babea Rahel+ mpo na ɔde nguan reba no!” 7 Afei ɔkae sɛ: “Sɛ́ ade nsae, na bere nsoe sɛ moboaboa mmoa no ano. Momma nguan no nsu nnom na momma wonkodidi.” 8 Ɛnna wobuae sɛ: “Yenni ho kwan sɛ yɛyɛ saa gye sɛ nguan no nyinaa ba ha ansa na yɛayi ɔbo no afi abura no ano. Saa bere no na yɛma nguan no nsu nom.” 9 Bere a ogu so ne wɔn rekasa no, Rahel de ne papa nguan bae, efisɛ na ɔyɛ oguanhwɛfo. 10 Bere a Yakob huu ne wɔfa Laban ba Rahel ne Laban nguan no, ɛhɔ ara na Yakob kopiaa ɔbo no fii abura no ano, na ɔmaa ne wɔfa Laban nguan no nsu. 11 Afei Yakob few Rahel ano na ɔmaa ne nne so sui. 12 Yakob ka kyerɛɛ Rahel sɛ ne maame ne Rebeka, enti Rahel papa yɛ ne busuani.* Ɛnna Rahel de mmirika kɔka kyerɛɛ ne papa. 13 Bere a Laban+ tee ne wɔfase Yakob ho asɛm ara pɛ na ɔde mmirika kohyiaa no. Afei ɔbam no few n’ano, na ɔde no baa ne fi. Na Yakob kaa nea asi nyinaa kyerɛɛ Laban. 14 Laban ka kyerɛɛ no sɛ: “Ampa ara, woyɛ me dompe ne me honam.”* Enti ɔne no tenae bosome baako. 15 Afei Laban ka kyerɛɛ Yakob sɛ: “Esiane sɛ woyɛ me busuani*+ nti wobɛsom me kwa anaa? Dɛn na memfa ntua wo ka?+ Ka kyerɛ me.” 16 Ná Laban wɔ mma mmea baanu. Ɔpanyin no din de Lea, na kumaa no de Rahel.+ 17 Nanso na Lea aniwa mma nhyɛ da nyɛ fɛ, na Rahel de, na ɔyɛ ɔbea a ne ho yɛ fɛ na ne ho twa. 18 Ná Yakob pɛ Rahel, enti ɔkae sɛ: “Ma mensom wo mfe ason na fa wo babea kumaa Rahel ma me.”+ 19 Ɛnna Laban kae sɛ: “Eye sɛ mede no bɛma wo sen sɛ mede no bɛma ɔbarima foforo. Kɔ so tena me nkyɛn.” 20 Na Rahel nti, Yakob somee mfe ason,+ nanso ɛyɛɛ n’ani so sɛ nna kakraa bi efisɛ na ɔdɔ no. 21 Afei Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ: “Me bere aso, enti fa me yere ma me, na me ne no nna.” 22 Ɛnna Laban frɛfrɛɛ nnipa a wɔtete hɔ nyinaa behyiae, na ɔtow pon. 23 Nanso ade sae no, ne babea Lea mmom na ɔde no brɛɛ no sɛ ɔne no nna. 24 Afei nso, Laban de n’afenaa Silpa maa ne babea Lea sɛ n’abaawa.+ 25 Ade kyee no, ɔnkɔhwɛ a Lea ni! Enti obisaa Laban sɛ: “Dɛn na woayɛ me yi? Ɛnyɛ Rahel nti na mesom wo? Adɛn nti na woadaadaa me?”+ 26 Ɛnna Laban buae sɛ: “Ɛha de, yɛnyɛ no saa. Yɛn de, yɛmfa akumaa no mma aware ansa na ɔpanyin no aware. 27 Wo ne ɔbea yi ntena nnawɔtwe. Ɛno akyi no, mede ɔbea baako yi nso bɛma wo na woasom me mfe ason aka ho.”+ 28 Yakob penee so ne ɔbea no tenae maa nnawɔtwe no soe, na ɛno akyi no Laban de ne ba Rahel maa no aware. 29 Afei nso, Laban de n’afenaa Bilha+ maa Rahel sɛ n’abaawa.+ 30 Ɛnna Yakob ne Rahel nso dae, na na ɔdɔ Rahel sen Lea, na ofii ase som Laban mfe ason bio.+ 31 Bere a Yehowa hui sɛ Lea kunu nnɔ* no no, ɔma onyinsɛnee;*+ Rahel de, na ontumi nnyinsɛn.+ 32 Afei Lea nyinsɛn woo ɔbabarima na ɔtoo no din Ruben,*+ na ɔkae sɛ: “Yehowa abɛhwɛ m’amanehunu.+ Afei de, me kunu bɛdɔ me.” 33 Na ɔsan nyinsɛn woo ɔbabarima, na ɔkae sɛ: “Yehowa ate sɛ me kunu nnɔ me, enti na wama me oyi nso.” Na ɔtoo no din Simeon.*+ 34 Na onyinsɛn bio woo ɔbabarima, na ɔkae sɛ: “Afei de, me kunu bɛka aba me ho, efisɛ mawo mma mmarima baasa ama no.” Enti ɔtoo no din Lewi.*+ 35 Na ɔsan nyinsɛn woo ɔbabarima, na ɔkae sɛ: “Afei de, mɛkamfo Yehowa.” Enti ɔtoo no din Yuda.*+ Afei awo no tew kɔe.
^ Nt., “ne nua.”
^ Anaa “me ho nipa a me ne wo fi mogya baako mu.”
^ Nt., “me nua.”
^ Nt., “tan.”
^ Nt., “obuee ne yam.”
^ Ɛkyerɛ, “Hwɛ, Ɔbabarima!”
^ Ɛkyerɛ, “Wate.”
^ Ɛkyerɛ, “Ka Fam Ho; Ka Bata Ho.”
^ Ɛkyerɛ, “Nkamfo; Ade a Wɔkamfo.”